Manomboka ny volana janoary ka hatramin’ny desambra ny taom-piasan’ny orinasa iray, ka maninona raha avela hiasa hatramin’ny desambra izahay, hoy ireo mpandraharaha misehatra amin’ny hazo eto Morondava, fa tsy alatsaka antenantenan-taona ny fanapahan-kevitra mandrara ny fahazoanay akora amin’ny asa ataonay, nefa mba mambidi-bola amin’ny fanjakana ihany na dia orinasa madinika aza izahay.
Nisy ny hetsika nataon’izy ireo, ho fanairana ny fanjakana fa Malagasy aman’arivony no tra-pahasahiranana manoloana io Naoty mandrara ny fampiasana ny hazo io.
Tsy misy mandà ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolena ireo hazo notapahina, fa akora toy ny akora rehetra azo kajiana, azo vokarina ary azo itadiavam-bola izy io.
Firenena maro no mampiasa ny hazo nefa tsy voatery ho simba ny tontolo iainana.
Toliara: Nogiazana ireo sambo sinoa miisa enina nanjono tsy ara-dalàna »